पेट, छाती पोल्ने समस्या छ ? खाली पेटमा यी १० चिज खाँदैनखानुस् !
पेट र छाती पोल्ने समस्या प्राय सबैमा देखिन्छ । तर हाम्रो खानपिनमा थोरै ध्यानदिने हो भने यो समस्याको कारण डाक्टरकोमा पुग्ने र पैसा खर्च गर्नु पर्ने हुँदैन ।स्वस्थ जीबनयापनको लागि हामी फलफुल खाने गर्छौं । दुध तथा चिनी हाम्रो खानाका अभिन्न अंगहुन् । तर यी मध्ये कतिपय चिजहरु राम्रा हुँदाहुँदै पनि खाली पेटमा खानु हुँदैन ।ति चिजहरु हुन् :-
केरामा म्यागनेसियम एकदमै धेरै हुन्छ। यसलाई खालि पेट खायौ भने शरीरमा क्याल्सियम र म्याग्नेसियमको ब्यालेन्स बिग्रिन्छ। जसलेगर्दा छाती पोल्ने र पाचनक्रियामा समेत गडबडी आउने हुन्छ ।
सुन्तलामा अर्गानिक एसिड हुन्छ।पेट खालि भएकोबेला शरीरमा त्यतिकै पनि एसिड (अम्ल) को मात्र धेरै हुन्छ।त्यसमाथि यदि खालि पेटमा सुन्तला खायौ भने यसले एसिडको मात्रा अत्याधिक बढाउँछ । बैज्ञानिक अनुसन्धानबाट के देखिएको छ भने पेटमा एसिड धेरै हुँदा छाती र पेट पोल्ने तथा पथरीको समस्या समेत आउने हुन्छ ।
सखरखण्डमा टैनिन र पैकटिन जस्ता पदार्थ हुन्छन् ।गम जस्तो यो पदार्थलाई खाली पेटले पचाउन सक्दैन । परिणाम स्वरूप छाति पोल्ने समस्या देखापर्छ ।
प्राय सबैलाई थाहा छ, दुधमा स्याचुरेटेड फ्याट (चिल्लो पदार्थ ) र प्रोटीन हुन्छ।खालि पेटमा दुध सेवन गर्दा यसले पेटको मांशपेसीलाई कमजोर पार्छ ।यसकारण दुधलाई खाली पेटमा सेवन गर्यो भने पाचनक्रियामा समस्या देखिनुको साथै यसले कफ पनि बढाऊछ ।
हामीहरु शरीरको बोसो घटाउन, ब्लडप्रेसर नियन्त्रण गर्न बिहानै ग्रीन टि पिउने गर्छौं । तर ग्रीन टिमा हुने कैफिनले शरीरमा एसिडको मात्रलाई बढाऊछ । एउटा समस्याबाट मुक्त हुन पिउने त्यही ग्रीन टि खालि पेटमा सेवन गर्दा एसिडिटी बढ्छ । र, पाचनक्रियामा समस्या ल्याएर अरु नयाँ समस्या उत्पन्न गराऊछ ।
त्यसैपनि चिनीलाई ‘व्हाइट एण्ड स्वीट पोइजन’ भन्ने गरिन्छ ।खालि पेटमा चिनी सेवन गर्दारगतमा चिनीको मात्रा बढ्छ । चिनी खाँदा शरीरलाई आवश्यक पर्ने उर्जा र शक्ति त प्राप्त हुन्छ तर यसको मात्रामा वृद्धि हुदैजादा यसले थकान पनि बढ्छ ।
सफ्ट ड्रिंक्सहरुमा कार्बोनेट एसिडको मात्रा अधिक हुन्छ। यसले शरीरमा एसिडको मात्रा बढ्छ । त्यसपछिको समस्या उही हो, छाती पोल्ने, पेट पोल्ने ।अनि एसिडिटीको समस्या पनि बढ्छ र साथसाथै छटपटी पनि हुन सक्छ।
चियामा पनि एसिडको मात्रा निक्कै नै धेरै हुन्छ।त्यसैले खालि पेटमा चियाको सेवनले पेट पोल्ने र दुख्ने समस्या हुन्छ भने अल्सर हुने सम्भावना पनि हुन्छ।
खर्बुजामा विटामिन , आइरन , म्याग्नेसियम, र पोटासीयमको मात्रा निक्कै नै धेरै हुन्छ। शरीरको लागि अति आवश्यक यी तत्वहरु खाली पेटमा पुगे भने चाहिंएसिडिटीको समस्या आउछ। साथसाथै पाचनक्रियामा पनि समस्या आउँछ । अझ पानि खाने बित्तिकै खर्बुजा खानु र खर्बुजा खाए लगत्तै पानि खानु त झन् हानिकारक हुन्छ । यदि त्यसो गरियो भने पखाला लाग्ने निश्चित छ ।